» सामाजिक सञ्जाल : समाजलाई जोड्दै कि तोड्दै ?
चितवन – सूचना आदान प्रदान गर्न, आफ्ना विचार र भावना व्यक्त गर्न, सामाजिक गतिविधिबारे जानकारी लिन दिन, समूहभित्र अन्तर्क्रिया गर्न तथा ज्ञान बाँड्न सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, हृवाट्सएप, युट्युब आदि) मानिसका लागि वरदान बनेर आयो । सञ्चारले पूर्णता पाउन दुईतर्फी सञ्चार आवश्यक पर्दछ अथवा प्रापकको प्रतिक्रिया पनि जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यसले तुरुन्तै जोडिन सकिने गरी सहज बनाइदियो ।
हाम्रो नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जाललाई पछ्याइरहेको छ । ती हाम्रै छोराछोरी, भाइबैनी हुन् । यसबाट उनीहरुले के सिक्ने ? अनि भोलिको समाज कता जाने ? विश्वमै सामाजिक सञ्जाल अहिले यति सशक्त माध्यम बनेको छ कि सरकारले कुनै कमजोर निर्णय गर्दा नागरिकको विरोध सामना गर्नै सक्दैन र त्यसलाई सच्याउन या फिर्ता लिन त्यो देशको सरकार बाध्य हुनुपर्छ । हामी यति शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाललाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नेतर्फ जानुपर्छ । तथ्यमा टेकेर तर्क सङ्गत र सभ्य रुपमा आफ्ना विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । अनिमात्र त्यसको सुनुवाइ हुन्छ ।
इन्टरनेटले विश्वलाई सानो गाउँमा रुपान्तरण गरिदिएको छ । यो २१औँ शताब्दीको लागि अभूतपूर्व अवसर हो । तसर्थ, यसलाई उपयोग गरेर हामीले सामाजिक सम्बन्धलाई अझै कसिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सामाजिक सम्बन्धमा नै तनाब र दरार उत्पन्न गराउने अभ्यासतर्फ गयौँ भने घाटा हामीलाई नै हुन्छ । हामीकहाँ केहीले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरेर दर्जनौँ राम्रा काम पनि गरेका छन् । यसबाट बिरामीले उपचार पाएका छन् । भोका पेटले अन्नपानी पाएका छन् । असहाय तथा अप्ठ्यारोमा परेका मानिसको उद्दार भएको छ । तर यसको दुरुपयोगले सदुपयोगका केही राम्रा उदाहरणलाई छायाँमा पार्नु दुःखद् हो ।